Ngwa Cannabis Nye Nkwado maka Ikikere na Illinois
Akwụkwọ ikike izizi ụgbọala Cannabis
Kedụ ihe iwu ọhụụ nke Illinois kwuru gbasara ndị na-ebugharị ndị na-ebugharị ụgbọ na steeti?
Ndi oru Cannabis bu ndi n’ebu ibu cannabis ma obu onyinye cannabis butere n’ime Illinois. A choro iburu ndi otu a ka ha na ebugharị cannabis ma ọ bụ ngwaahịa ndị a na-eweta cannabis gaa na ebe a na-akọ ugbo, ndị ọrụ aka, ndị na-ahụ maka ngwa ahịa, nzukọ na-ebugharị, ebe nnwale, ma ọ bụ dịka iwu si dị.
N'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Ndị Na-ebugharị Cannabis na Illinois. Site na inweta ikikere, ihe ndi choro, na mgbochi ndi ndi oburu n’agha imeghari ikike.
Ntinye akwụkwọ ikike
Ndị otu na-ebugharị Cannabis na Illinois chọrọ ikikere iji rụọ ọrụ. Ngalaba na-enwetara ikike a ka ọ ga - ebubata ya na July 1, 2020. Ngalaba ahụ ga-eme ka akwụkwọ anamachọihe ahụ dị malite na Jenụwarị 7, 2020, ndị otu niile chọrọ ikikere ga-enweta ruo mgbe Machị 15, 2020, mere ngwa.
Mgbe nke ahụ gasị, ndị otu ga-enwe n'agbata Jenụwarị 7 ruo Mach 15 nke afọ ọ bụla iji tinye akwụkwọ anamachọihe ha. Ma ọ bụrụ na ụbọchị ndị a daa na ngwụsị izu ma ọ bụ ezumike, òtù ndị ahụ ga-enwe ruo ụbọchị azụmaahịa ọzọ iji tinye akwụkwọ.
Achọrọ A na-ebufe Ndị Na-ahụ Maka Transportgbọ njem Cannabis n'enye akwụkwọ ikike ikike ikike Mpempe akwụkwọ ahụ kwesịrị ịnwe;
Detailsfọdụ nkọwa ga-achọ maka ngwa a gụnyere:
(1) ụgwọ ngwa akwụghị akwụghachi $ 5,000 ma ọ bụ, ka ọnwa Jenụwarị 1, 2021 gachara, ego ozo dịka nke Ngalaba Ọrụ Ugbo nyere, ka etinye ya na Nhazi Iwu Cannabis;
(2) Aha ụgbọ njem;
(3) Adreesị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ọ bụrụ na a tụrụ aro ya;
(4) Aha, nọmba nchekwa ọha, adresị, na ụbọchị ọmụmụ nke ndị isi ọrụ yana ndị isi oche; nke ọ bụla n’ime ha kwesịrị ịbụ afọ iri abụọ na abụọ;
(5) nkọwa nke usoro nchịkwa ma ọ bụ nke ikpe nke ndị isi ọrụ niile ma ọ bụ onye otu ndị isi
(i) ikpe mara, tụọ ya mkpọrọ, tụọ ya mkpọrọ, ma ọ bụ
(ii) bụ onye otu ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ na-anaghị akwụ ụgwọ nke mara ikpe, tụọ ya mkpọrọ, kwụọ ụtụ, ma ọ bụ kagbuo ikike ikike ya;
(6) iwu tụpụtara ka ijikwa ụlọ ọrụ ahụ nke gụnyere; usoro a na-edobe akwụkwọ, usoro a na-edebe ndị ọrụ, yana atụmatụ nchekwa nke ngalaba ndị uwe ojii steeti kwadoro na nke dabara na iwu enyere n'iwu a. Companieslọ ọrụ ndị na-ebugharị njem kwesịrị ime nchọpụta kwa izu maka izu.
(7) nkwenye nke enyocha nyocha emere na ndị otu nke ụlọ ọrụ ahụ.
(8) Detuo iwu ikike mpaghara mpaghara ugbu a iji gosipụta ụlọ ọrụ ahụ na iwu niile edebere.
(9) chọrọ usoro ọrụ iji gosi itinye aka na omume ọrụ ọfụma, na
(10) ma onye anamachọihe gosiputara ahuma ihe na omume ma obu omume azumahia nke n’eme ka ike aku na uba puta na mpaghara Ndi ana - ekpu;
(11) ọnụọgụ na ụdị akụrụngwa ndị ụlọ ọrụ na-ebugharị ga-eji na-ebufe cannabis na ngwaahịa cannabis na-ebute;
(12) atụmatụ, ebugharị, na nbudata;
(13) nkọwa nke ahụmịhe nke onye na-arịọ arịrịọ na nkesa ma ọ bụ azụmahịa nchebe;
(14) njirimara onye ọ bụla nwere ego ma ọ bụ ịtụ vootu nke 5% ma ọ bụ karịa na nzukọ na-ebugharị ya na nke a chọrọ ikikere ahụ, ma ọ bụ ntụkwasị obi, ụlọ ọrụ, mmekorita ya, ụlọ ọrụ nwere ikike dị oke mkpa, ma ọ bụ naanị iji aka ya, gụnyere aha na adres onye ọ bụla; na
(15) ozi ọ bụla ọzọ iwu chọrọ.
Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-akwụ ndị na-ahụ maka Organigbọ njem Cannabis ikike na Illinois, na usoro ihe. Ihe ngosi a dabere na otu esi ahazi ya ma hazie ya, yana etu esi emeghachi omume n'ihe ọmụma achọrọ.
Ndi otu ihe ruru 85% na ndi ozo ma mezuo ihe nile achọrọ maka ikike inweta ikike njem a gha enye ya ikike n’ime ubochi iri isii ha webatara ngwa ha.
Ozugbo nzukọ nwetara ikike, ozi niile etinyere na ngwa ahụ, gụnyere atụmatụ ya, ga-abụ ọnọdụ mmachi nke ikike ahụ. Ọ bụrụ na irube isi na ha nwere ike ime ka mmadụ megharịa ya ihe ọ bụla nwere ike ịgụnye iwepụ akwụkwọ ikike.
Ndi otu ndi tozuru oke inweta ikike gha acho ikwu ugwo $ 10,000 tupu ha enweta ikike ha. A na-etinye ego a na ụnyaahụ Cannabis Regulation Fund.
Ajuju nke ngwa
Ngalaba 40-20 nke iwu cannabis na usoro ịtụ ụtụ isi na-ekwu na ngwa nke Cannabis na-ebugharị ndị na-ahazi na Illinois nwere ike ịjụ ma ọ bụrụ;
(1) Ngwa anaghị enyefe ihe niile achọrọ
(2) Ngwa anaghị agbaso usoro iwu mkpuchi mpaghara ma ọ bụ ikike nnabata
(3) Onye ọ bụla so na kọmitii ma ọ bụ ndị isi ọ bụla mebiri ihe nzukọ ahụ chọrọ
(4) Onye isi ndị isi ọ bụla ma ọ bụ ndị otu ndị otu nzukọ dị n'okpuru afọ 21
(5) Ngwa nwere ozi ugha
(6) Onye isi, onye nwe akwụkwọ ikike, onye otu bọọlụ, ma ọ bụ onye nwere ego ma ọ bụ ịtụ vootu nke 5% ma ọ bụ karịa na akwụkwọ ikike ahụ, adịghị akwụ ụgwọ maka iweghachite ụtụ ọ bụla ma ọ bụ ịkwụ ego ọ bụla ejiri na steeti Illinois.
Organizationgbọ njem chọrọ na ihe mgbochi
Ndị niile chọrọ ịnabata ụgbọ njem ikikere chọrọ;
(1) Nwere usoro maka ijikwa nzukọ yana usoro nlezianya nke ngwa ahịa
(2) Naanị ibugharị cannabis ma ọ bụ ngwaahịa ndị a na-enye cannabis gaa na etiti ịkụkụ, ebe a na-anwale ule, ma ọ bụ ndị ọrụ aka, nzukọ na-ebugharị, ma ọ bụ dịka iwu nyere ikike.
(3) Detuo cannabis a ebufe ma tinye ya na akpa cannabis mgbe ị na-ebugharị
(4) Kpesa ndị nwe obodo ihe funahụrụ ma ọ bụ izu ohi n'ime awa 24 nke nchọpụta ahụ ma ọ bụ site na ekwentị, na mmadụ ma ọ bụ site na ide.
(5) Mee ka onye ọ bụla n’agbata afọ iri abụọ na abụọ ghara ịnọ ọdụ ụgbọ ala na-ebuga cannabis
Cardgbọ Mpempe Akwụkwọ Nkwado Ndị Na - anya
Achọrọ ndị na-ebugharị ụgbọ njem ka ha nwee kaadị njirimara maka ha maka ịrụ ọrụ maka nzukọ ọ bụla na-ebuga na Illinois.
Kaadị njirimara onye ọrụ gị kwesịrị ịnwe;
(i) Aha onye nnọchite anya
(ii) issuebọchị amịpụta na njedebe
(iii) Njirimara njirimara pụrụ iche (Kwesịrị inwe mkpụrụ 10)
(iv) Foto nke onye nwere kaadi
(v) aha iwu nke nzukọ na-ebugharị nke bụ onye were ndị ọrụ ntaramahụhụ
A bịa na kaadị ahụ, a na-enye Ngalaba iwu ka;
(1) Kpebie ozi ị ga-enweta site na iji akwụkwọ anamachọihe
(2) Inyocha ozi ahụ n'ụdị ngwa wee kwado ma ọ bụ jụ ngwa ụbọchị iri atọ gachara
(3) Inye kaadị ID nke onye na-ahụ maka ya ụbọchị iri na ise ka akwadochara ya
(4) Kwe ka ihe eji kọmputa na nkwenye nye nkwenye
Iwu a chọrọ ka ndị nnọchi anya mee ka kaadị njirimara ha hụ ka ha na-ere ahịa azụmahịa cannabis. Achọkwara ka ha weghachi nzukọ kaadị njirimara ahụ mgbe nkwekọrịta ha na-arụ ọrụ gwụsịrị ma ọ bụ kwụsị. Ọ bụrụ na kaadị ahụ efuola, onye nnọchi anya ahụ ga-akpọtụrụ ndị uwe ojii nke Steeti ozugbo yana Ngalaba Ọrụ Ugbo.
Organizationgbọ njem na-enyocha n'okirikiri
Steeti Illinois chọrọ ka ndị nyocha nke ndị isi, ndị ọrụ bọọdụ, na ndị nnọchi anya njem ụgbọ ala ga-enyocha nyocha nke ndabere tupu nzukọ a enyefee akwụkwọ ikike maka akwụkwọ ikike ya nke mbụ.
A ga-eme nyocha ahụ site na Ngalaba ndị uwe ojii nke steeti. A ga-achọ ndị isi ndị isi, ndị ọrụ bọọdụ, na ndị nnọchi anya ka ha nye akara aka ha maka nyocha.
A ga-achọ ka ndị otu ụlọ ọrụ kwụọ ụgwọ nyocha maka ime mpụ, nke a ga-akwụ ndị ọrụ uwe ojii steeti ego.
Mmeghari ohuru nke Ikikere Lic nweta Ikikere na Kaadi idide Ndidi.
A ga-emeghee akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala na kaadị njirimara onye na-ahụ maka ụgbọ njem ọ bụla kwa mgbe ọ kwụsịrị. Ngalaba Ọrụ Ugbo ga-enye ọkwa ma ọ bụ elektrọnik nke ngafe, ụbọchị 90 tupu ụbọchị ngafe.
Ndị otu a na-ebugharị Cannabis na Illinois kwesịrị ịtụ anya inweta mmezigharị ha ụbọchị iri anọ na anọ ka ha mechara ngagharị iwe ma ọ bụrụ;
(1) Ha na-akwụzị ụgwọ mmeghari ohuru na-akwụghị ụgwọ nke $ 10,000 debere na nabkpụrụ Iwu Cannabis
(2) Ewepubeghị ikike ma ọ bụ kwụsịtụrụ ikike maka nzukọ ahụ maka imebi iwu ọ bụla
(3) Nzukọ a arụ ọrụ dịka atụmatụ nke esetịpụrụ dịka akụkụ nke ngwa ya ma ọ bụ mmezigharị emere atụmatụ ahụ ma Ngalaba Ọrụ Ugbo kwadoro.
(4) organizationlọ a ekenyela akụkọ dịgasị iche iche dịka Ngalaba chọrọ
Lọ ọrụ na-ebugharị nke na-emezigaghị ikike ikike ha tupu ụbọchị ha gwụsịrị akwụsị ịrụ ọrụ ruo mgbe ikike ha ga-emegharị ọzọ. Companieslọ ọrụ ọ bụla nke na-arụ ọrụ mgbe ọ bụla ọ kwụsịrị ikikere ikike ha nwere ntaramahụhụ.
A ga-atụkwa anya ihe ndị ga-eme ka kaadị njirimara ya emebiela. A gaghị ekwe ka ndị ọrụ ndị ahụ sọpụrụ isi rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ na-ebugharị cannabis na Illinois. Ọ bụrụ na ha emee ya, a na-enyekwa ha ntaramahụhụ.
Organitù ma ọ bụ ndị nnọchi anya na-etinyeghị aka na mkpesa nloghachi ụtụ ma ọ bụ na-akwụ ụgwọ o ji Steeti Illinois agaghị emezị ikikere ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ inweta akwụkwọ ikike maka ọgbakọ na-ebugharị cannabis ma ọ bụ ndị nnọchite gị, ịkwesịrị ịkpọ ọka iwu cannabis maka enyemaka.